Guangzhou Comax Telecommunication Fiber Cable CO., LTD is a high-tech company group engaged in researching, wax soo saar, iibinta badeecadaha isgaarsiinta oo leh xuquuqdeenna dhoofinta iyo dhoofinta. Shirkadeena waa soo saare xirfadlayaal ah fiilada fiber optic-ka iyo xargaha balastar ka badan 6-sano, leh ISO, UL, CPR, ROSH, AKHRISKA iyo shahaadooyinka CE.
Waxaan OEM ama u naqshadeyneynaa qaab dhismeedka fiilada fiber optic-ka adiga. Alaabada ugu weyn ee shirkadeena waa: fiilooyinka fiilooyinka fiber-ka iyo qaybaha iftiinka ee fiber-ka. Dhamaan alaabada waxaa si balaadhan looga isticmaalaa isgaarsiinta, budada korantada, wadada tareenka iyo waaxyaha kale ee la xiriira isgaarsiinta, loo dhoofiyo waddamo iyo degmooyin badan sida Ameerika, Yurub, Mideast iyo Koonfur-bari Aasiya.
Guangzhou Comax Telecommunication Fiber Cable CO., LTD is a high-tech company group engaged in researching, wax soo saar, iibinta badeecadaha isgaarsiinta oo leh xuquuqdeenna dhoofinta iyo dhoofinta.
Guangzhou Comax Telecommunication Fiber Cable CO., LTD. © 2020 XUQUUQDA XUQUUQDAADA